YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, March 17
တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာ ကို လေးစားဖို့လိုအပ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာပါ အကြုံပြုချက်တွေကို တရုတ် ဝမ်ဘောင် ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ အလေးထား လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ်အစိုးရ အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဝမ်ရင်ဖန်း Mr. Wang Yin Fang က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်မှာ မနေ့က နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရာမှာ မစ္စတာ ဝမ်ရင်ဖန်း Mr. Wang Yin Fang က ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်ဘောင်ကုမ္ပဏီ အပါဝင် တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ထွက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်တာ ကာလတိုတောင်း သေးတဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံ အားနည်းချက်တွေကြောင့် လက်ပံတောင်းတောင် ပြသနာလို ကိစ္စရပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့ မိမိတို့ တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ အလားတူ ပြဿနာတွေကို ရှောင်လွှဲနိုင်အောင် ပြည်ပမှာ သွားရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်နေတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပိုမိုပြီး ထိတွေ့ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်အစိုးရ အရာရှိက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းလဲကာလမှာ လူ့အခွင့်ရေး ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေး အပါဝင် လက်ရှိမြန်မာလူထုရဲ့ အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ ပိုမိုမြင့်မားလာတဲ့အတွက် ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲနဲ့ အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့လည်း မစ္စတာ ဝမ် ရင်ဖန်းက ဆိုပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ အထူးအဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးနဲ့ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အပါဝင် တခြား ပါတီတွေ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ တက်ရောက်လာသူတွေကလည်း တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံရေး ၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစတဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ဆက်ဆံမှုတွေမှာ နိုင်ငံတကာ ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းတွေနဲ့ အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 3/17/20130comment
James Mint's photo.
အခုလက်ရှိ လက်ပံတောင်း ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဒေါ်စုအပေါ် ဝေဖန်တာတွေ တော်တော်တွေ့ရပါတယ်...... ကောင်းသော ဝေဖန်ခြင်း၊ မကောင်းသော ဝေဖန်ခြင်းနဲ့၊ ဆိုက်ဝါးသမားများ ဝေဖန်ခြင်း အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်...... အဓိကအားဖြင့် ဒေါ်စုဟာ လက်ပံတောင်း ကော်မရှင် ဥက္ကဌအဖြစ်နဲ့ ထိုးကြွေးခံရတယ်၊ ခေါင်းရောင်းခံရတယ်၊ အစိုးရရဲ့ အသုံးချတာ ခံရတယ်၊ အစိုးရရဲ့ အရှုပ်ထုပ်ကို ကူရှင်းပေးတယ်၊ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံခံရတယ် အစရှိသဖြင့် တွေ့ရပါတယ်.....
ဒါဖြင့် သူမလိုလူတစ်ယောက်ဟာ လက်ရှိဝေဖန်နေကြသလို အစိုးရရဲ့ အသုံးချတာ ခံလိုက်ရအောင်၊ အစိုးရက ထိုးကြွေးတာ ခံလိုက်ရအောင် အတော့ကို ညံ့ဖျင်းနေသလား မေးစရာ ရှိလာပါတယ်....... ဒေါ်စုရဲ့ The Lady ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးဟာ ပေါ့ပေါ့တန်တန် ရခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး..... The Lady ဆိုရင် သူမရဲ့ ထီမထင်မှု၊ ရဲဝံ့မှု၊ သတ္တိရှိမှု၊ ပြတ်သားမှု၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခေါင်းမာမှုတွေကို လူတွေ ပြေးမြင်တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၊ နှစ် ၂၀ ကျော် စစ်အစိုးရရဲ့ နှိပ်စက်မှုမျိုးစုံကို ကြံ့ကြံ့ခံ ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ဝေဖန်နေကြတဲ့ အသုံးချခံ၊ ထိုးကြွေးတာခံရတယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုဘက်က နာသလိုလိုနဲ့ ဒေါ်စုကို သိက္ခာပိုင်းအရ ထိုးနှက်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်.....
အားလုံး စဉ်းစားစေချင်တာ ဒေါ်စုဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အိုင်ကွန်ဖြစ်သလို၊ ကမ္ဘာက လေးစားရတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်...... လက်ရှိအစိုးရအပေါ်မှာ သူမ အရှိန်အ၀ါ အထိုက်အလျောက် လွှမ်းမိုးမှုရှိသလို လာမယ့် ၂၀၁၅ ဆိုတာဟာ ဘယ်သူမှ ဒါရယ်လို့ ကံသေကံမ ပြောလို့မရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအပေါ်မှာ အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ နာမည်လေးလုံးရဲ့ အရှိန်အ၀ါဟာ ကြီးမားနေဦးမှာ ဖြစ်သလို၊ သူမရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမှုဟာ ကြီးမားနေဦးမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါ........
ဒီနေရာမှာ ပြန်စဉ်းစားသင့်တာဟာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်...... အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာ ၂၀၁၀ အစိုးရသက်တန်းအတွင်းမှာသာ ရပ်ဆိုင်းထားတာ ဖြစ်လို့ နောက်အစိုးရ တက်လာတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း CPI အနေနဲ့လည်း မြစ်ဆုံကို ပြန်စဖို့ အစပျိုးလာမှာပါပဲ...... ဒါကိုရင်ဆိုင်ရမှာဟာ ၂၀၁၅ မှာတက်လာမယ့် အစိုးရပါ..... ၂၀၁၅ မှာ ကြံ့ဖွံ့မဲမခိုးရင် မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဝေးဝေးပြေးကြည့်စရာမလိုတဲ့ ဒေါ်စုတစ်ယောက်သာ ဖြစ်လာမှာပါ....... ဒီအတွက် မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ပြဿနာကို သူမ မလွဲမသေ ရင်ဆိုင်ရမှာ အသေအခြာပါပဲ....... အဲ့ဒိအချိန်မှာမှ မြစ်ဆုံကိုစဖို့ ဘက်ပေါင်းစုံက ပြင်ဆင်ထားတဲ့ တရုတ်ကိုဟန့်တားဖို့ ရင်ဆိုင်ဖို့ဟာ တော်တော့ကို ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်.....
ဒါဆိုရင် လက်ပံတောင်း အရှုတ်ထုပ်၊ မြစ်ဆုံ အရှုတ်ထုပ်၊ ပိုက်လိုင်း အရှုတ်ထုပ်အပြင် အခြားသော အရှုတ်ထုပ်ပေါင်း များစွာဟာ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရနဲ့သာ ဆိုင်သလား၊ မြန်မာပြည်နဲ့ သက်ဆိုင်နေသလား ခွဲခြားရှုမြင်လို့ ရပါပီ...... ရှေ့အစိုးရလက်ထက်က လုပ်ခဲ့တာ နောက်အစိုးရဟာ သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ အလွယ်တကူ ငြင်းပယ်လို့မရပါ..... ကောင်းသည် ဆိုးသည်မှန်သမျှကို ခံစားပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရမှာ နောက်တက်လာတဲ့ အစိုးရတိုင်းရဲ့ တာဝန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...... ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၀ အစိုးရဟာ အခွံသာသာကို လက်ခံရလိုက်လို့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ အကြပ်အတည်းတွေ တွေ့နေတာကို နမူနာ ယူနိုင်ပါတယ်...... ထို့အတူပဲ ၂၀၁၀ အစိုးရမှ ၂၀၁၅ အစိုးရကို လွှဲပေးချိန်မှာလည်း အခွံပဲဆိုရင်တော့ ၂၀၁၅ တက်လာမယ့် အစိုးရလည်း ဗိန်မသာ လိမ်မသာ အကြပ်အတည်းတွေနဲ့ အခက်အခဲများစွာထဲမှ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ယူရမှာပါ....... ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးလို့ နစ်နာတာဟာ ပြည်သူလူထုပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သတိချပ်စေခြင်ပါတယ်.....
လက်ပံတောင်း အစီရင်ခံစာကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အလွန့်ကို အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေများစွာထဲက အဓိက အချက်ဖြစ်တဲ့ ဒေသခံတွေဘ၀၊ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် နဲ့ နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအရ စာချုပ်ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုမှ လုပ်ငန်းဆက်လုပ်ဖို့ အတိအလင်း ညွှန်းဆိုထားပါတယ်...... အရှင်းလင်းဆုံး ဆိုရရင်တော့ လက်ပံတောင်း အစီရင်ခံစာရဲ့ အဓိက အသက်လို့ တင်စားနိုင်သလို နောင် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စီမံကိန်းတွေကို ပြန်လည်စိစစ်ရမှာလည်း အဓိကျတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...... ဒါဆိုရင် ဒေါ်စု လက်ပံတောင်း ကော်မရှင်ကို တာဝန်ယူခြင်း အကြောင်းရင်းကို သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.......
ဒေါ်စုနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ရဲဝံ့တယ်၊ ကြံ့ခိုင်တယ်၊ တည်ကြည်တယ်၊ ပြတ်သားတယ်၊ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေ အများကြီးရထားတယ် ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အကျိုးရှိအောင် သူမ ဘာလုပ်ခဲ့တာ ရှိသလဲလို့ မေးလာရင် ဖြေဖို့ ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်...... ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူ အနောက်နိုင်ငံသားများ အပါအ၀င် အများစုဟာ ဒေါ်စုရဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အမြင်၊ အကြားသာရှိပြီး လက်တွေ့မရှိတဲ့အတွက် မှန်းဆလို့ ခက်ခဲကြောင်း ၀န်ခံထားတာတွေ ရှိပါတယ်...... ဒီအတွက် လက်ပံတောင်း ကော်မရှင်မှာ ဥက္ကဌအဖြစ် ဒေါ်စုပါဝင်ခဲ့ခြင်းဟာ မိမိအရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်ပြနိုင်ဖို့လို့ ကျွန်တော် တစိုက်မတ်မတ် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်......
အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရလည်း ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ဒီရာထူးကို လက်ခံခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..... မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယနေ့ အချိန်အခါမှာတော့ ဒေါ်စုဟာ သူမရဲ့ ထွန်းပြောင်တဲ့ အရည်အချင်းကို ကမ္ဘာသိအောင် ပြဆိုနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် တရုတ်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စီမံကိန်းများကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရမှာ လွန်စွာမှ အသုံးဝင်တဲ့ Guide Line တစ်ခုကို ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပါ စိုက်ထူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်..... ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ အစိုးရ အာဏာပိုင်များဘက်က ပံ့ပိုးမှု ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့် လက်ခံရရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...... ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီကိစ္စတွေဟာ ဒေါ်စုအပေါ် နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှု ဟုတ်သလား မဟုတ်သလား ခွဲခြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်......
သို့ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ပံတောင်း ကော်မရှင် ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ လက်ရှိအစိုးရ အသုံးချခံပြီး အရှုပ်ထုပ်ကို ရှင်းပေးတာလား၊ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံခံရခြင်းလား၊ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ Guide Line တစ်ခုကို ချပေးပြီး နောင်အလားတူ ပြဿနာမျိုးများအတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေကို ပေးလိုက်ခြင်းလား ကွဲကွဲပြားပြား ခွဲခြားမြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ တင်ပြလိုက်ပါတယ်......
Photo Credit to The Voice Weekly
r လက်ပန်းတောင်းတောင် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ၏ တုံသပိတ်စခန်းနှင့် လိပ်ခွံတောင်၊ အင်ကြင်းတောင် သပိတ်စခန်းများအား ရုတ်သိမ်းသည့်ကြေငြာချက်
ရွာသစ်တွေမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ လယ်ယာမြေတွေလိုအပ်
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းရမည့်ဒေသခံများ အတွက် မြေလျော်ကြေးငွေအပြင်နေထိုင်မှုအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ကို မုံရွာမြို့အနီးတစ်ဝိုက် နေရာများတွင် စီစဉ်ပေးမည်ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်နှင့် ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူများ ပြောကြား.........
လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းရမည့်ဒေသခံများ အတွက် မြေလျော်ကြေးငွေအပြင် နေထိုင်မှုအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ကို မုံရွာမြို့အနီးတစ်ဝိုက် နေရာများတွင် စီစဉ်ပေးမည်ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် မြန်မာဝမ်ပေါင်မိုင်းနင်းကော့ပါး ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူများက မတ် ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီသတ္တုတွင်း ဧရိယာသည် ၇၈၆၇ဒ သ မ ၇၈ ဧကရှိပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်းရှိ ကျေးရွာလေးရွာဖြစ်သော ၀က်မှေး၊ ကံတော၊ ဆည်တည်းနှင့် ဇီးတောကျေးရွာများမှ အိမ်ခြေ ၄၀၀ ကျော် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
စီမံကိန်းနယ်မြေတွင် သိမ်းဆည်းမြေဧရိယာ စုစုပေါင်း ၇၈၆၇ ဒသမ ၇၈ ဧကအနက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမြေ ၅၀၅၇ ဧက ရှိကြောင်း၊ ဦးပိုင်မပေါက်သော်လည်း မြေလျော်ကြေးပေးပြီးသော ဧရိယာမှာ စိုက်ပျိုးမြေ ၁၇၂၇ ဧက အပါအ၀င် ၆၇၈၄ ဧက ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်မှ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း တာဝန်ခံ ဦးမြင့်အောင်က "လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြအကြံပြုထားတဲ့ မြေယာလျော်ကြေး ကိစ္စတွေ၊ စိုက်ပျိုးမြေ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရေး ကိစ္စတွေ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အား ပြန်လည်ပြင်ဆင် ချုပ်ဆိုရေး ကိစ္စတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စတွေ၊ ဒေသခံ လူထုအတွက် အကျိုးကျေးဇူး ရရှိစေရေးအပြင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးရေး ကိစ္စတွေ စတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းရမယ့် ကျေးရွာတွေအတွက်လည်း နေရာတွေ စီစဉ်ပေးဖို့အတွက် ရွာတွေဆောက်ထားပြီးသား ရှိပါတယ်။ ရွာနှစ်နေရာ ဆောက်ထားပါတယ်။ စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်နဲ့ ဆောက်တာပါ။ ရေ၊ မီး အပြည့်အစုံ ပါပါတယ်။ အဲဒီနေရာတွေကို တချို့ပြောင်းကုန်ကြပြီ။ နေရာက စီမံကိန်းဧရိယာ အပြင်ဘက် သွားလာဆက်သွယ်ရေးကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု မတ် ၁၆ ရက်က ပြောကြားသည်။
မြန်မာဝမ်ပေါင် မိုင်းနင်းကော့ပါး ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ Admin Manager Mr.Dong Yun Fei က "ဒေသခံ ပြည်သူလူထုများရဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လိုလားသည်များကို အချိန်မရွေး ဂရုတစိုက် နားထောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ဒေသခံများနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုတွေလည်း ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တုတွင်းစီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မိသားစုတွေရဲ့ လူမှုဘ၀ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားဖြည့်ဆည်းသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းရမယ့် ဒေသခံတွေအတွက် မုံရွာမြို့နဲ့ ငါးမိုင်လောက်ပဲ ကွာတဲ့ နေရာမှာ ရွာတွေ ဆောက်ထားတယ်။ အဲဒီရွာတွေကို သီးသန့်မြေကွက်ဖော်ပြီး လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာထဲက အိမ်တွေကို A,B,C,D ဆိုပြီး အဆင့်တွေ ခွဲထားပါတယ်။ အရင် သူတို့နေခဲ့တဲ့ အိမ်တွေက အရမ်းကောင်းခဲ့ရင် A အဆင့်အိမ်တွေကို ပေးပါတယ်။ နည်းနည်းညံ့ရင် B အဆင့်၊ ညံ့ရင် C အဆင့်၊ အရမ်းညံ့ပြီး တဲသာသာဖြစ်ရင် D အဆင့်ဆိုပြီး ပြန်ခွဲထားပါတယ်။ ရေမီးအပြည့်အစုံနဲ့ အိမ်ကောင်းတွေ ပြန်ဆောက်ပေးထားတာပါ။ အဲဒီနေရာတွေကို တချို့လည်း ပြောင်းကုန်ပါပြီ။ ကျန်သေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လိုအပ်ရင်လည်း အိမ်တွေထပ်ဆောက်ပြီး နေရာချထားပေးဖို့ ရှိပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
၀က်မှေးကျေးရွာမှ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းက "ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ နှစ်ကာလပေါင်းများစွာ နေလာပြီး သစ်ကြီးဝါးကြီးတွေရှိတဲ့ မူလဒေသမှာပဲ နေလိုပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က လက်ရှိနေတဲ့ရွာမှာ လယ်ယာမြေတွေ ရှိတယ်။ ဟိုမှာက မရှိနိုင်ဘူး။ အခုပြောင်းရမယ့် ရွာတွေက ကျွန်မတို့ လက်ရှိနေတဲ့ရွာနဲ့ နှစ်မိုင်၊ သုံးမိုင်လောက် ဝေးတယ်။ အဲဒီရွာသစ်တွေမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ လယ်ယာမြေတွေမရှိရင် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ နေ့တိုင်း လယ်မြေတွေရှိတဲ့ မူလနေထိုင်တဲ့ ရွာတွေကိုပြန်လာပြီး ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အများကြီး လိုအပ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာတွင် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သတ္တုတွင်းနယ်မြေတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမှုဝန်းကျင် ပြဿနာများသည် မြေယာသိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားမှု အပေါ်တွင် အဓိကအားဖြင့် အခြေပြုခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်ရကြောင်း၊ သတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မြေလိုအပ်ချက်အား စနစ်တကျ သိရှိနားလည်စေမှုနှင့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများကြောင့် နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အရပ်ဒေသအတွက် အကျိုးကျေးဇူး ရှိနိုင်ပုံများအား သိသာသော အထောက်အထား၊ အချက်အလက်များ ပြသမှု၊ ထိုက်တန်သော ပေးလျော်မှု၊ အစားထိုး တည်ဆောက်ပေးမှု လိုအပ်သည်ဟု အကြံပြုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များကို ဖတ်ရှုနေသော တောင်သူများအား မတ်လ ၁၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက တွေ့ရစဉ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် သိမ်းယူထားသော မြေယာများအတွက် လျော်ကြေးငွေများကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီသည် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ယာမြေသိမ်းဆည်း ခံခဲ့ရသူများအတွက် လျော်ကြေးငွေများကို ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မတ်လ ၁၃ ရက်နဲ့ ၁၄ ရက် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်ပြီး ယာမြေအတွက် လျော်ကြေးငွေ သိန်းပေါင်း ၅၀၀၀၀ နီးပါး ပေးမယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၅ ရက်နေ့မှာတော့ ကံတော-၀က်မှေး ရွာသစ်မှာ မြေယာတွေ စိစစ်ပြီး လျော်ကြေးငွေ ထပ်ပေးမယ်လို့ ကြေညာတာကို ကြားလိုက်ရတယ်။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်တို့အဖွဲ့ လာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်” ဟု ရွှေလှေကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
“လျော်ကြေးငွေ ပေးတဲ့နေရာမှာ ကွင်းအမှတ်စဉ်တွေနဲ့ စနစ်တကျ စစ်ဆေးပြီး တောင်ပလူ၊ ကျော်ရွာ၊ အောင်ချမ်းစည်၊ ဖောင်ကတာ ကျေးရွာတွေက တောင်သူတွေကို လျော်ကြေးငွေတွေ ပေးနေတာ တွေ့ရတယ်။ ရေသွင်းစိုက်လို့ရတဲ့ လယ်မြေတစ်ဧကအတွက် ၁၅ သိန်း၊ မိုးစိုက်ယာ မြေတစ်ဧက အတွက် ၁၂ သိန်း၊ ကျောက်ကုန်းတွေလို သီးနှံစိုက်ရခက်တဲ့ မြေတွေအတွက်တော့ ၁၀ သိန်းနှုန်းနဲ့ လျော်ကြေးပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု ဆားလင်းကြီးမြို့ပေါ်တွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးက ပြောကြားပါသည်။
မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က ကျေးရွာငါးရွာမှ မြေသိမ်းခံတောင်သူ ၅၂ ဦးကို ငွေကျပ် ၂၂၄၆၇၆၀၀၀ အား ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပြီး မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်လည်း အခြားကျေးရွာများမှ တောင်သူများအား လျော်ကြေးငွေများ ဆက်လက်ထုတ်ပေးခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
“ဆည်တည်းရွာဟောင်းနဲ့ တုံကျေးရွာက သိပ်မလာဘူးလို့ သိရတယ်။ လျော်ကြေးထုတ်ဖို့ တောင်သူတွေကို ကံတော-၀က်မှေး ရွာသစ်မှာ ကားစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်မက တစ်ဧကခွဲအတွက် ငွေလာထုတ်တာပါ။ သိမ်းခံရတဲ့ မြေပေါ်မှာ အဆောက်အဦတွေတောင် ဆောက်ပြီး နေပြီ။ ရတဲ့ငွေလေးကို ခြစ်ချုပ်ပြီး သုံးရမှာ၊ တခြားနေရာမှာ နေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟု ရွှေလှေကျေးရွာမှ ဒေါ်မှတ်တင်က ပြောကြားပါသည်။
“ဦးပိုင်ပေါက်တာ မပေါက်တာကို မကြည့်ဘူး။ ဧကပေါင်း ၆၇၈၄ ဧကရှိတဲ့ အကွက်တွေထဲမှာရှိရင် လျော်ကြေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လိမီတက်မှ ဦးမြင့်အောင်က ပြောကြားပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်စဉ်က ငါးဦးသာ ၀င်ခွင့်ပြုပြီး မြေယာအငြင်းပွားမှုများတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လိမီတက်၏ အကြိမ်ကြိမ် တရားစွဲဆိုခြင်းခံခဲ့ရသူ ဆည်တည်းကျေးရွာမှ ဦးမြင့်တင်က “ဆည်တည်းရွာဟောင်းအနေနဲ့ အချို့ကတော့ လျော်ကြေးမယူဘူး မဟုတ်ဘူး။ ယူမယ်။ ဒါပေမယ့် ကာလပေါက်ဈေးထက် နည်းနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဥပမာ လျော်ကြေးက ၁၅ သိန်းဆိုရင် အပြင်မှာ သိန်း ၅၀ လောက် ပေါက်တယ်။ ၂၀၁၁ ဧပြီလမှာ လျော်ကြေးပေးတုန်းက အပြည့်အ၀ရတဲ့ တောင်သူတွေ ဆည်တည်းရွာဟောင်းမှာ အယောက် ၉၀ လောက်ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် တောင်းဆိုကြရင်းနဲ့ ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါ ရီမှာ လျော်ကြေးငွေ ထပ်ရတယ်။ ယာမြေတွေကို ကာလပေါက်ဈေးရဖို့ တောင်းဆိုကြရင်းနဲ့ ဒီလိုအဖြစ်ထိ ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးမြင့်တင်သည် ဆည်တည်း -ဇီးတော ရွာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြထားကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ ပြန်သွားပြီးနောက်တွင် စီမံကိန်း ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သမ္မတ ရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မုံရွာမြို့မှတစ်ဆင့် စီမံကိန်းနယ်မြေ အတွင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး ၁၆ ရက်နေ့၌ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးတွင် ညောင်ပင်ကြီး၊ ဖောင်းကား၊ ရွာရှည်၊ ကျော်ရွာ၊ တောင်ပလူ၊ မိုးကြိုးပြင် ကျေးရွာများမှ တောင်သူများကို လျော်ကြေးငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့ သပိတ်စခန်းတွေကို ဒေသခံတွေက
ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြပါပြီ။ ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာထွက်လာအပြီး သီတင်း
တစ်ပတ်နီးပါးအကြာမှာ သပိတ်စခန်းတွေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့
လယ်ယာမြေတွေကို ပြန်လိုချင်ကြပြီး သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေအတိုင်း
အကောင်အထည်ဖော်မှု ရှိ-မရှိဆိုတာကို စောင့်ကြည့် သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေး
မြန်းထားတဲ့ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်
မရှင်ရဲ့ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့စွဲနဲ့ အစီရင်ခံစာကို မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်
မတ်လ ၁၆ ရက် စနေနေ့မှာ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်တ၀ိုက်က တုံ၊ လိပ်ခွံတောင်နဲ့
အင်ကြင်းတောင် သပိတ်စခန်းတွေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သပိတ်စခန်းတွေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတွေကို ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့
ဆရာတော် ဦးစန္ဒာသီရိက အခုလို ရှင်းလင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
“မနေ့က ညနေပိုင်းလောက်မှာပဲ တုံရွာသပိတ်စခန်း ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ အင်းကြင်းတောင်ရယ်၊ လိပ်ခွံတောင်ရယ်
စခန်းတွေကတော့ ညနေပိုင်း မှောင်ရီပျိုးလောက်မှာပဲ ဒေသခံပြည်သူတွေက ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးတော့ အင်ကြင်း
တောင်ဘုရားမှာ ပူဇော်ပြီးတော့ မိမိတို့ဒေသခံတွေက ဒါ အောင်ပွဲခံပြီးတော့၊ မိမိတို့ရဲ့ကျေးရွာမှာပဲ အေးအေး
သပိတ်စခန်း ဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေအပါအ၀င် လက်ပံတောင်းတောင် တချို့ဒေသတွေမှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ ညမထွက်ရ
အမိန့် ထုတ်ပြန် ထားဆဲဖြစ်တာကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလည်း အဲဒီအမိန့်ကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ဒေသခံတွေက
လိုလားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီအမိန့်ကို သက်တမ်းနှစ်လ တိုးပြီး ထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့် လောလောဆယ်
တော့ မရုပ်သိမ်းသေးဘူးလို့ ဆရာတော် ဦးစန္ဒာသီရိကမိန့်ပါတယ်။
မြင့်တက်လာတဲ့ ပဋိပက္ခအရှိန်အဟုန်တွေကို လျှော့ချဖို့၊ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံတာကို ရှောင်လွှဲဖို့တို့ အပြင် ဖြစ်ပေါ်လာ
တဲ့ အခြေအနေတွေအရ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး တောင်းဆိုမှုကို တခြားနည်းလမ်းတွေ
နဲ့ ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် သပိတ်စခန်းတွေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ လက်ပံတောင်း
တောင် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီရဲ့ သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကော်မတီက မတ်လ
၁၆ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
ဆန္ဒပြ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ ကော်မရှင်အစီရင်ခံစာမှာ ပါရှိတဲ့ အကြံပြုချက်တွေအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေက
လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုလားတယ်လို့ ဦးစန္ဒာသီရိက မိန့်ပါတယ်။
“ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေကတော့ ဒေသခံလယ်သမားတွေဟာ တော်တော်များများကတော့ မိမိပိုင် ဘိုးဘွား
လယ်မြေတွေကိုပဲ ပြန်လည်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်ရယူချင်တယ်။ လုပ်ကိုင်စားသောက်ချင်တယ်။ ဒီ စီမံကိန်း ဧရိယာ
တကယ်လွှမ်းမယ့်ဧရိယာ မြေယာကိုပဲ သိမ်းပြီးတော့၊ ကျန်တဲ့မလိုအပ်တဲ့ ပြည်သူတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်ရ
မယ့်မြေတွေ ကို ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ဒါ အစီရင်ခံစာမှာ တွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။ နောက်ပြီး ကျနော်တု
ိ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြီး ဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာတောင်မှ ဒါ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပြဌာန်း
ချက်တွေနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့နည်းပညာတွေ အသုံးပြုပြီးတော့ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ မရှိ၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း
မရှိလို့ရှိရင် ဒီစီမံကိန်းကလည်း ဖျက်သိမ်းရမယ့်အနေအထားတွေ ရှိလာတယ်။”
ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေအပေါ် အားရ ကျေနပ်တယ်လို့ ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေ
များကွန်ယက် ကလည်း မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ ပေးရတဲ့တန်ဘိုး မျှတမှုမရှိတဲ့
အတွက် ကြေးနီစီမံကိန်း ကို ဆက်လုပ်ဖို့မသင့်ဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ယက်က ဦးလှထွန်းကပြောပါတယ်။
“အစီရင်ခံစာထဲမှာ ကျနော်တို့ တွေ့ရှိတဲ့အချက်တွေက ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လုံးဝကြီး ကျနော်တို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ပျက်စီးမှုတွေ၊ environment and social impact အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် တော်တော်ကြီးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား
တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုတဲ့ တွေ့ရှိချက်အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ စီမံကိန်းကို ကျနော်တို့ ဆက်ပြီး
လုပ်ဖို့ ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့လည်း သဘောမတူပါဘူး။”
ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဖျက်သိမ်းဖို့အတွက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့သူတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက အင်အားသုံးနှိမ်နင်းခဲ့
တာကြောင့် အပြင်းအထန် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် လက်ပံတောင်းအရေးဟာ ပိုပြီး တင်းတင်း
မာမာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ နောက်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
ကြည်ကိုယ်တိုင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာ ထွက်လာပြီးတဲ့
နောက်ပိုင်း လက်ပံတောင်းဒေသဆီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီးတော့ ဒေသခံတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဲဒီခရီးစဉ်အတွင်း ပြောဆို ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအပါအ၀င် အစီရင်ခံစာပါ အချက်တချို့
အပေါ် သဘော ထားကွဲလွဲကြတာတွေကြောင့် လက်ပံတောင်းအရေး ဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပက မြန်မာ့အရေး စိတ်
၀င်စားသူတွေကြားမှာ ဒီရက်ပိုင်း တွေအတွင်း အဓိက ဝေဖန် ပြောဆို ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်နေ
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ပြီး ပိုလျှံပါက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ ရောင်းချသွားရန်ရှိ
မဂ္ဂ၀ပ် ၄၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ရွာသစ်ရေကာတာ စီမံကိန်းနှင့် ပက်သက်ပြီး Social Impact အပေါ် နိုင်ငံတကာ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့များမှ ဆန်းစစ်သွားမည်၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ပြီး ပိုလျှံပါက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ ရောင်းချသွားရန်ရှိ
Friday, 15 March 2013 23:00
ကယားပြည်နယ် ဘောလခဲ ခရိုင်အတွင်း သံလွင်မြစ်မအား ပိတ်ဆို့ပြီး မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀
ထုတ်လုပ်မည့် ရွာသစ်ရေကာတာ စီမံကိန်းနှင့် ပက်သက်ပြီး Social Impact အတွက်
နိုင်ငံတကာ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့များဖြင့် ဆန်းစစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်၍ ပိုလျှံပါက အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများအား ရောင်းချသွားရန်
ရှိကြောင်း မတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ကယားပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးခင်မောင်ဦးက
Eleven Media Group ၏ မေးမြန်းချက်အား ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
တရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် ဒါးတန်းမှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်မည့် ရွာသစ်ရေကာတာ
စီမံကိန်းမှာ လက်ရှိတွင် မြေသားတိုင်းတာမှုများသာပြုလုပ်လျက် ရှိသေးကြောင်း
နောင်နှစ်ခန့်တွင်သာ စတင်ဆောက်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခိုက်နိုင်မည့်အပေါ် နော်ဝေ၊ ဆွီိဒင် နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့
အစည်းများနှင့် လေ့လာသုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဆက်လက်
ပြောကြားခဲ့သည်။“လက်ရှိ မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀ ထွက်မယ့် ရေကာတာက အခုမှ မြေသား
တိုင်းမှုကိုသာ စလုပ်နေပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး စီမံကိန်းကိုလည်း နောက်နှစ်လောက်
ကြာမှ အကောင်အထည် ဖော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရယ်တွေကို နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့
သူတို့က ဆိုးကျိုးရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ရေကာတာကို ရပ်ဆိုင်းမှုတွေ ပြုလုပ်မယ်၊
ဘာသက်ရောက်မှု မရှိဘူးဆိုရင် ရေကာတာကို အကောင်အထည် ဖော်မယ်၊
လျှပ်စစ်တွေ ပိုလျှံရင်လည်း အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကို ရောင်းသွားဖို့ ရှိပါတယ်” ဟု
ကယားပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
စက်ယန္တရား အများအပြားဖြင့် မြေစာများအား တူးဖော်သယ်ယူမှုပြုပြီး ဓာတ်သတ္တုများ၊
ရွှေများအား သန့်စင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ မြေသယ်ယာဉ်များဖြင့် ပို့ဆောင်မှုများနှင့်
လုံခြုံရေးတပ်အင်အား အများအပြား ချထားကြောင်းကို တွေ့ရသည်ဟု စီမံကိန်းနှင့်
နီးစပ်ရာ ဒေသံခံများက ပြောပြခဲ့သည်။လက်ရှိအချိန်တွင် အကောင်အထည် ဖော်မည်
ဖြစ်သော ရွာသစ်ရေကာတာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအား
၀န်ကြီးဌာနကသာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ပြည်နယ်
အစိုးရအနေဖြင့် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ပိုင်ခွင့် မရှိသေး
ကြောင်း ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခင်မောင်ဦးထံမှ သိရသည်။“လက်ရှိက
ပြည်သူတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောသင့်တာ ရှိသလို ထုတ်ဖော်
မပြောသင့်တဲ့ ကိစ္စတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် လုံခြုံရေး အင်အားတွေ ရှိသလဲ
ဆိုတော့ မြေတိုင်းတာမှုတွေ ပြုလုပ်နေစဉ်မှာ မလိုလားတဲ့
သူတွေက ၀င်ရောက်တားဆီး နှောက်ယှက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ပါ” ဟု
ကယားပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးခင်မောင်ဦးက ဆက်လက်
ကယားပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးခင်မောင်ဦး
၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီလျော်ကြေး လက်ခံရယူသူ နည်းနေသေး
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် သိမ်းဆည်းလိုက်တဲ့ မြေယာတွေအတွက် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖေါ်နေတဲ့ တရုတ် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ဒီနေ့ကစပြီး လယ်ယာမြေလျော်ကြေး စတင်ပေးနေရာမှာ တောင်သူအများစုက သွားမထုတ်ကြဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို သေသေချာချာ မသိသေးတဲ့အတွက် အခုလို လယ်မြေဆုံးရှုံးမှု လျော်ကြေးငွေတွေပေးတာကို လက်မခံကြသေးတာလို့ ကျော်ရွာဒေသခံ မသင်းသင်းခိုင်က RFA ကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“မနက် ၇နာရီလောက်မှာလေ ဆားလင်းကြီးက မြေစာရင်းရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူက ကျမတို့ရွာကို လာပြောတာ၊ လူကြီးကိုလွှတ်ပေးပါပေ့ါ၊ အခုလျော်ကြေးပေးတော့မှာမို့ပေါ့၊ ကျမတို့ရွာကတော့ ဘာမှလည်းနားမလည်သေးဘူး၊ သူတို့ရဲ့အသစ်ချုပ်မယ့် စာချုပ်တွေကိုလည်း ဘာမှမသိရသေးဘူး၊ ရမ်းသန်းပြီးတော့ မထုတ်ချင်ဘူး၊ စောင့်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့၊ သုံးနှစ်စာသီနှံလျော်ကြေးတုန်းကတော့ လက်ခံချင်တယ်ရှင့်၊ အခုကတော့ ကျမတို့ကလည်း သွားမထုတ်ဘူး”
လျော်ကြေးပေးနေတဲ့တန်ဖိုးက ကာလပေါက်ဈေး တစ်ဧကကို ကျပ် ၁ဝ သိန်းကနေ ၁၅ သ်ိန်းကြား ပေးနေတယ်လို့ဆိုပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ ထုတ်ယူနေတဲ့ လူဦးရေဟာ ဆယ်ဂဏန်းကျော်သာ ရှိနေသေးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ လယ်ယာမြေတွေအတွက် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ကျပ်ငွေ သိန်းပေါင်း ၄၆၄၀၀ ကျော်ကိုပေးမယ်လို့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အစီရင်ခံစာကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးတင်မြင့်က မနေ့က RFA ကို အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးမြေဧက ၁၉၀၀ကျော်ကိုလည်း ဒေသခံတွေအတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ဦးပိုင်နဲ့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတ်ို့က ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သတိ ... စစ်ဆေးမှု့ ခံယူပါ . . အန္တရယ်ဇုံ
နောက်ကွယ်မှာ သွေးထိုးတဲ့သူတွေ ရှိတယ်လို့ မပြောပါနဲ့တဲ့ ၊ The Voice က ပြောသွား တာကို တချို့က သိပ်မကြိုက်ကြဘူးထင် ။ ဒီပုံပါ သူပုန် (မှားလို့) ဓါတ်ပုံ သတင်းထောက်ကြ...ီး ကိုပဲ မေးကြည့်ပါ ။ သူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါ .... သတင်းလိုက်သွားတဲ့ သတင်းထောက်တိုင်း အခြေအနေကို နားလည်ပါတယ် ။
ဘာလဲဗျ .... အန္တရယ်ဇုံ .... ရွာသားတွေ ထပ်ပြီး ၀င်အစီးခံရအောင် လုပ်နေတာလား ၊ အဲသည် ဇုံထဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လမ်းလျောက်ဝင်သွားတာကို ကျနော်တို့က စိတ်ဆိုးတာ ၊
ဘာအထာတွေ လုပ်ထားတဲ့ ရွာမှန်း မသိဘူး .... ဒါကတော့ သဘောဖြူရိုးစင်းတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ လုပ်ကွက် မဟုတ်လောက်ပါဘူး .... ဓါတ်ပုံပါ သတင်းထောက်က ဟိုချောင်း ဒီချောင်း ခွေးတိုးပေါက် ကလေးများ တွေ့မလား ချောင်းတော့ လေးဂွတွေ နဲ့ အချိန်ခံ ရတယ်တဲ့ .....
သတင်းသမားကို ရန်မူတယ် ၊ ဒေါ်စုကိုလည်း ရန်လိုတယ် ၊ ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့် ..... ရွာထဲမှာ ဘိန်းချက်နေလို့လား ....
ဓါတ်ပုံ - Aung Pyae
Thit Htoo Lwin blog's photo.
ရက်စွဲ။ ။ ၁၃၇၄-ခု၊ တပေါင်းလ္ဆန်း(၅)ရက် (၁၆-၃-၂၀၁၂)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်းတောင်၊ ကြေနီစီမ...ံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏၊ (၁၂-၃-၂၀၁၃-)ရက်စွဲပါ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို အပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်း သဘောထားကြေညာချက်ကို အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။
ဦးပဉ္စင်းဝီရသူသည် ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၀)ရက်နေ့၊ (မသွဲ့သွဲ့ဝင်း၊ မအေးနက်တို့ အပါအဝင် ရွာသူ(၁၂)ယောက် အဖမ်းခံရသည့်နေ့) ဆည်တည်းကျေးရွာတွင် “ပြည်သူပျော်သော အသုဘ”တရားကို ဟောကြားသည့် အချိန်မှ စ၍၊
၂၀၁၂-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၂၉)ရက်နေ့ (သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းခံရ၍ သံဃာတော်များနှင့် ရွာသူရွာသားများ ဒဏ်ရာရသည့်နေ့)အလည်၊ ယခု နောက်ဆုံးအချိန်ထိ လက်ပံတောင်းနေတောင်အရေးတွင် ကိုယ်အားဉာဏ်အား ငွေအားနှင့် သံဃာအင်အားပါမကျန် စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည်မှာ ရွာသူရွာသားတို့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ခံရမှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၊ သာသနိကအဆောက်အဦးတို့ ပျက်စီးပျောက် ကွယ်မှုများ၊
တိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရ၏ အကိုင်အတွယ်ညံ့ဖျင်းမှုများကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်၍ ဆန္ဒပြပြည်သူများနှင့်အတူ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၂-၃-၂၀၁၃-ရက်နေ့၌ ထုတ်ပြန်သော စစ်ကိုင်းတိုင်ဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာတွင်
ရွာသူရွာသားတို့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးထားသည်ကို လည်းကောင်း၊
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်စေရန် ကာကွယ်ပေးထားသည် ကိုလည်းကောင်း၊
နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို လမ်းဖွင့်ပေးထားသည်ကို လည်ကောင်း၊
နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ တိုက်ထဲသို့ ငွေကြေး အမြောက်အ များ ရောက်ရှိ်စေရန် စီမံပေးထားသည်ကိုလည်းကောင်း၊
သာသနိက အဆောက်အဦးများ၊ ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် စောင့်ရှောက်ပေးထား သည်ကိုလည်းကောင်း၊
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ကင်းဝေးစေရန် စီစဉ်ပေးထားသည် ကိုလည်းကောင်း၊
တောင်သူလယ်သမားများ၏ အခြားလိုအပ်ချက်ကို ကိုယ်အားဉာဏ် အားရှိသမျှ ကူညီဖြည့်စွက်ထားသည်ကိုလည်းကောင်း၊
မီးခိုးဗုံး(သို့)မီးလောင်ဗုံး အသုံးပြုရာတွင် တာဝန်ရှိသူများကို ဖော်ထုတ်ပေး ထား သည်ကိုလည်းကောင်း၊
တွေ့ရှိရသောကြောင့် ဤအပြီးသတ်အစီရင်ခံစာသည် အလုံးစုံပြည့်စုံသော အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။
(က) လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွင်းတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာပေါင်း
(၂၆)ရွာရှိ ရွာသူရွာသားများအနေဖြင့် မိမိတို့နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်များ အပြည့်အဝရရှိရေး၊
သာသနိကအဆောက် အဦးများ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ရေး၊
အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်း အပြည့်အဝရရှိရေး၊
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတိုက်ထဲသို့ ငွေအလုံးအရင်း ရောက်ရှိစေရေး၊
မီးခိုးဗုံး(သို့)မီးလောင်ဗုံး အသုံးပြုရာတွင် တာဝန်ရှိသူများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူရေးတို့ကို ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ တောင်းဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ တောင်းဆိုရာတွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီက အပြည့်အဝ လိုက်လျောခြင်း၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိမှသာလျှင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သင့် သည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။
(ခ) ၁၃-၃-၂၀၁၃-ရက်နေ့နှင့် ၁၄-၃-၂၀၁၃-နေ့များ တွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် သူများ ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြစွာ ဆက်ဆံသူများကို ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချအပ်ပါသည်။
ထိုသို့ ကိုယ့်အလိုဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင်ကို ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင် နေခြင်းသည် အနာဂတ် နိုင်ငံ့ရေးရာများတွင် ဦးဆောင်ဖြေရှင်းပေးမည့် လူထုကိုယ်စားပြု နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် များ ပေါ်ပေါက်မလာနိုင်အောင် ပိတ်ဆို့တားမြစ်ရာ ရောက်ပါသည်။
(ဂ) ထို့အပြင် ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီလုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရေးကို တောင်း ဆိုနေကြခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီးတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကို လိုလားသော ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်နေသလို နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများ လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ကို နှောက်ယှက် ဟန့်တားရာ ရောက်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စိတ်ဆင်းရဲစေရန် တမင်ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိဖြင့် ပြုမူနေသည်များနှင့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုကို ဟန့်တားနှောက်ယှက် နေခြင်းများကို ယခု ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းပေးပါရန် တိကျပြတ်သားစွာ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
(ဃ) ရွာသူရွာသားများ အနေဖြင့် ကြိုးကိုင်သူလူတစ်စု၏ စကားကို နားယောင်ပြီး တိုင်းပြည်မျက်နှာကို မကြည့်ဘဲ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါက မိမိတို့လိုအင်ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အနိဋ္ဌာရုံကိုသာ ရရှိခံစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
(င) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီအနေဖြင့် စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေးကော် မရှင်၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို တစ်ပြားသားမှ မလျော့စေဘဲ အပြည့်အဝလိုက် နာ ဖော်ဆောင်ပေးရန်နှင့် ရွာသူရွာသားများ အမြင်ရှင်းစေရေး အတွက်
ပြန်ကြားရေးဌာန တစ်ခုဖွင့်ပြီး နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ချက်များ ဆက်လက်ဆောင် ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကို တရားဝင်ချပြကာ ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ အပ် ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြောရင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ မပါစေနဲ့ ။(ဟန်ဝင်းအောင်)
BY YeYint Nge ... 3/17/2013 1 comment
ဘပြောင် နယူးဇီလန် မှာဆူမိုတွေကိုတိုက်ပွဲဝင်နေစဉ်
သတင်းထောက်တွေ သူတို့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့ရွာထဲဝင်ရင် ကင်ပေတိုင်စခန်းထဲ ဝင်ရသလိုဖြစ်လာတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်နောက်ဆက်တွဲ အနောက်ကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့က အဲဒီအက်တစ်ဗစ်တွေကို နောက်ကွယ်က သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သူတွေလို့ တံဆိပ်ကပ်တာကို ... စစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်က ဆင်တူးရိုးမှား စွဲချက်တွေနဲ့ ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ပြန်နင်းတယ်လို့ တွင်တွင်ကြီးပြောလာနေပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာသမားစစ်စစ်တွေက အဲဒီဒေသမှာ အဲဒီလှုပ်ရှားသူ ၁ဝယောက်လောက် ၂ဝ၁၂ကတည်းက ဘာတွေလုပ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိထားပြီးသား။ ဘာတံဆိပ်မှလည်း ကပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူး။ သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာလို့ပဲ သဘောထားတာ။
ဒါပေမယ့် ဒီနောက်ကွယ်က ကိုယ်တော်ချောတွေက သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း မီဒီယာတွေမှာ ပါမလာတော့ သတင်းထောက်တွေကို ရန်စကားပြောလာတယ်။
သတင်းထောက်တွေ သူတို့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့ရွာထဲဝင်ရင် ကင်ပေတိုင်စခန်းထဲ ဝင်ရသလိုဖြစ်လာတယ်။ နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာကိစ္စမှာ မီဒီယာတွေကို ပြောဆိုဆက်ဆံတာက ရန်သူလိုဖြစ်လာတယ်။ ခြိမ်းခြောက်လာတယ်။ အန္တရာယ်ပြုလာတယ်။ ဒီတော့ မီဒီယာတွေက ဒေါ်စုထိလို့ ဒီနောက်ကွယ်ကလူတွေကို ထဖော်တာမဟုတ်ဘူး။ သတင်းမီဒီယာသမားအနေနဲ့ အခြေအနေမှန်ကြီးကို ပုံဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တသိုက်လက်ချက်ကြောင့် နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူ အကျိုးယုတ်မှာမို့ ရေးလာကြတာ။ ပြောလာကြတာ။
အခြေအနေမှန်ကို သေသေချာချာ နားလည်အောင်လုပ်ပါ။
အဲဒီထဲမှာ တက်တက်ကြွကြွပါဝင် ဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေ၊ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့သူတွေ ဘယ်သူတွေပါ၊ ဘာလိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မီဒီယာသမားတစ်ယောက်အပြင် ပြည်ပြေးကျောင်းသားဖြစ်ဖူးတဲ့ ကျနော်က အပြင်က ကျနော့်မိတ်ဆွေအချို့ထက် အခြေအနေတွေကို ပိုသိပိုနားလည်တယ်လို့တော့ ယူဆပေးပါ။
ယူဂျီလမ်းကြောင်းတွေ၊ အာဂျင်ဒါတင်တာတွေလည်း ပြည်ပမှာနေတဲ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေ သိကြမှာပါ။ အခုက ဒေသခံတွေဘယ်လိုသဘောထားထား ပြသနာမရှိဘူး။ အစီရင်ခံစာကို သဘောမတူဘူးဆိုရင်လည်း အစီရင်ခံစာက ဘယ်လိုဘယ်ပုံဆိုတာ ကူညီရှင်းပြရမှာ အဲဒီရွာထဲရောက်နေတဲ့ အက်တစ်ဗစ်တွေအလုပ်မဟုတ်ဘူးလား။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က ဒေသခံတွေကို ကူညီတာဆို၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေတာဆို ...
ရှေ့နေများကွန်ရက် ကြေညာချက်ကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်။
ဆရာမောင်ဝံသနဲ့ ကိုညိုတို့သဘောထားကို လက်မခံနိုင်ပါ။
တော်လှန်ရေးခေတ်ကုန်သွားပြီမို့ တည်ဆောက်ရေးခေတ်မှာ လေးနဲ့မြားကို ထားခဲ့ပေးပါ။
ဆန္ဒပြတာ ဆူဆူပူပူလုပ်လိုသူတွေဖြစ်တယ်လို့ မနှစ်က ပွက်လောညံနေချိန်မှာ ဆိုရှယ်မိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟာ ဒီမိုကရေစီအခြေကျရေးလို နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ပြီး ဆောင်းပါးတွေရေးခဲ့ပါတယ်။ အခုထိလည်း ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှပ်ကြောင်းပေးပြီး လိုသလိုလမ်းကြောင်းဖော်ပြီး ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ဦးတည်တဲ့လုပ်ရပ်ကိုတော့ ဆိုရှယ်မိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းရဲ့ သားရိုင်းအုပ်ကြီးတွေပါလို့ လက်ခံလို့မရတာ အမှန်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အော်ဟစ် သူများ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချပွဲ လုပ်ရန်စီစဉ်နေပြီဟုတုံ ရွာသား ကိုဇေယျ ပြော
အစီရင်ခံစာ ပါ အကြုံပြု ချက်တွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ် တယ်လို့တရုတ်အစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် ပြော
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ပါ အကြုံပြု ချက်တွေကို တရုတ် ဝမ်ဘောင် ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ အလေးထား လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ် တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ တရုတ်အစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဝမ်ရင်ဖန်း Mr. Wang Yin Fang က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်မှာ မနေ့က နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့စည်းတွေ နဲ့ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးရာမှာ မစ္စတာ ဝမ်ရင်ဖန်း Mr. Wang Yin Fang က ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်ဘောင် ကုမ္ပဏီ အပါဝင် တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ထွက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု ပြုလုပ်တာ ကာလတိုတောင်း သေးတဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံ အားနည်းချက်တွေကြောင့် လက်ပံတောင်းတောင် ပြသနာလို ကိစ္စရပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့ မိမိတို့ တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ အလားတူ ပြဿနာတွေကို ရှောင်လွှဲနိုင်အောင် ပြည်ပမှာ သွားရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု ပြုလုပ်နေတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပိုမိုပြီး ထိတွေ့ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ် အစိုးရ အရာရှိ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သလ္လာဝတီ တိုင်းမ် မှ တဆင့်ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့အပေါင်းအပါများ သို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ခင်ဗျား ကို တော်လှန်ရေး သမားတစ်ယောက် အနေနဲ့ကျွန်တော် လေးစားခဲ့ပါတယ်။
လက်ပံတောင်း အရေး မှာ ခင်ဗျား တို့သင်ပေးရာ က ခဲ့ ကြတဲ့တောင်သူတွေ ကိုတော့ 
မတ်လ၁၄ ရက်နေ့က ဒေါ်စုကြည် လာတုန်းက အဲဒီတောင်သူတွေ ကို ဒီလို က ပါဆိုပြီး
ခိုင်းတာ ကြိုးဆွဲ တာတွေ ကိုတော့ကျွန်တော် လုံးဝ မကြိုက်ဘူးဗျာ။
အခုမှ မကြိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။
တုံ သပိတ်စခန်း မှာ ဆန္ဒ ပြ တာတွေ လုပ်တိုင်း DVB က မတင်မာဆွေ တို့ကိုမောင်မောင် တို့ 
ပြီးတော့ခင်ဗျား တို့ဂိုဏ်း က ခင်ဗျား ရဲ့သာဝက ကိုသူ တို့အင်တာဗျူး တိုင်း
ရွာသားတွေ ကို ဒီလိုမဖြေနဲ့ဒီလို ဖြေ ဆိုပြီး သင်တာ တွေ ကို မုံရွာ က သတင်းထောက်တွေ
Citizen journalist တွေ အကုန်သိတယ်။ ခင်ဗျား တို့က ပုံစံ သွင်းနေတာ လေ။
ဆန္ဒပြ ပွဲ တစ်ပွဲ ပြီး တိုင်း တုံရွာ ထိပ် လမ်းဘေး မှာ ခင်ဗျား တို့မိန့် ခွန်း ချွေတဲ့ 
ပွဲတစ်ပွဲ လုပ်ဖို့ဇာတ်စင် အတွက် ရွာသားတွေ က ပေပါခွံ ရွက်ပြီင်္း ပေပါထောင်ကာ
ပေပါပေါ်တက်ပြီး ကိုယ့်အရပ်နဲ့ကိုယ့် ဇာတ် ဆို သလို ခင်ဗျား တို့ပီတိဝေတာတွေ
ကို ကျွန်တော် မြင်ခဲ့ ဖူးတယ် …………..ကိုဟန်ဝင်းအောင်။
အဲဒီ အချက် ကို မုံရွာ က အောင်နေမျိုး က သူ့ ရဲ့ဖေ့ ဘုတ်မှာ ခင်ဗျားတို့ကို စင်မြင့်ကြိုက်တဲ့ 
ဇာတ်ရူး တွေ လို့ ပြောတော့ခင်ဗျားတို့က အသည်းထဲက ပါ နာတယ်.။အင်း………….အောင်နေမျိုး ပြောတာ
ဆည်တည်း ရွာဟောင်း သုသန် မှာ လူသေကောင် ပါဖောင်းမန့်လိုလို ဇာတ်လမ်းကို ခင်ဗျားတို့က ခဲ့တာ ဇာတ်ရူးတွေမို့လို့ ပေါ့ ။
သမိုင်း စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီး သူရဲကောင်းတွေ ကို ခင်ဗျား သဘောကျ ရင် ကျ ပါ။
ခင်ဗျား မင်းရူး တော့မရူး ပါနဲ့ ။
ဦးအောင်ဇေယျ ထန်းလုံးခံတပ် နဲ့မုဆိုး ဖို မှာ နေပြည်တော် တည်ခဲ့သလို
ဆည်တည်း ရွာဟောင်း မှာ ခင်ဗျား တို့ဆူးချုံ ခံတပ် ဖွဲ့ပြီး တထီး တနန်း နဲ့
အရူး ဘုံမြောက် ခဲ့ကြသေးတယ် မဟုတ်လား။
ကိုဟန်ဝင်းအောင်………………ကျွန်တော် တို့က မုံရွာဒေသခံတွေပါ။
ကိုယ့် ဒေသ ကို ကိုယ်ချစ်တာပေါ့ ။
ကျွန်တော် က အာဏာရှင် မောင်သန်းရွှေ ကိုလည်း ရွံသလို အာဏာရှင် ကို အဖေ ခေါ် ပြီး
တိုင်းပြည် ဂုတ်သွေး စုတ်နေတဲ့ခရိုနီ တွေ ကို လည်း ရွံတယ်။
အာဏာရှင် တွေ ကို တော်လှန် ပါ။
ကျွန်တော် က ဒေါ်စု ကို အရမ်း လေးစားသူ လည်း မဟုတ်ဘူး။
သူ့ လို မလျှောက်နိုင် တဲ့နိုင်ငံရေး ခရီး ကြမ်း ကို ကျွန်တော် တို့လေးစားရမယ်။
ဒေါ်စု မှာ လည်း သူ့ အခက်အခဲ တွေ ရှိလိမ့် မယ်။
အာဏာ ရှင် စနစ် ရဲ့ဆိုးမွေ တွေ ကို ဥုံဖွ ဆိုပြီး မန်း လို့မရသေးဘူး။
ဘောလုံးစကား နဲ့ ပြောရရင် ဘောလုံး အသင်းလေးတွေ ဟာ လက်ရှိချန်ပီယံ ကို နိုင် ချင်ကြတယ်။အဲ
ဒီ လို နိုင်တာ ပိုပြီး လိုလားတယ်။
အခု လည်း ခင်ဗျား က မြန်မာ နိုင် ငံ က အလေးစားဆုံး .ဘောစကား နဲ့ဆိုရင် နိုင်ငံရေး ချန်ပီယံ
နိုဗယ် ဆု ရှင် ကို ခင်ဗျား နိုင်ချင်တယ်။ဒေါ်စု ကိုမြောင်း ထဲ ရောက်သွားစေချင်တယ်။
ခင်ဗျား ရဲ့အယူ က ဘုရား ကို သတ်ရင် ဘုရားဖြစ်ပြီ ဆိုတဲ့ရှင်ဒေဝဒတ် နဲ့ တူနေတယ်။
ဒေဝဒတ် က သံဃာ ကို သင်းပင်း ခွဲ သလို ခင်ဗျား က တောင်သူ ချင်းသွေးခွဲ သလို
ဒေါ်စုကြည် နဲ့တောင်သူတွေ မုံရွာသားတွေနဲ့သွေးခွဲပေးနေတယ်။ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားရဲ့
နိုင်ငံရေးလှည့် ကွက် ကို မြင်တဲ့သူတွေ က ခင်ဗျား ဟာ ဘုရားစေတီ မဟုတ်ဘဲ တောင်ပို့ ဆိုတာ
သိကြတော့မကိုးကွယ်တော့ ဘူး။ခင်ဗျား အပိုင်စား ထား နားရိုက်ထားတဲ့တုံရွာ၊ဆည်တည်းရွာဟောင်း၊
မိုးကြိုးပြင် အလယ်ရွာ တွေ က လွဲပြီး ခင်ဗျား ရဲ့လွဲမှားနေတဲ့အယူအဆကို ခင်ဗျား ပိုင်တဲ့ရွာတွေနား
က ဝက်မှေး၊ရွှေလှေ ၊ဖောင်းကတာ ရွာတွေ က လက်ခံကြရဲ့ လား။
သံဃာတော်တွေ ကို ဝိနည်း အသစ်တွေ ဒေဝဒတ် က သတ်မှတ်သလို ခင်ဗျား က negotiationစေ့ စပ်ဆွေးနွေး မှု
မလုပ်ဘဲ ခင်ဗျား ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမံကိန်း ရပ် ပဲ မျက်စိ မှိတ်ပြီး အော်ခိုင်းတယ်။
ဒါတောင်မှ ဒေါ်စု ကို ရိုက်ဖို့နှက်စေဖို့ခင်ဗျား တို့နန်းတည်တဲ့ဆည်တည်း ရွာ မှာ တုတ်တရမ်းရမ်း
နဲ့ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့ ကြသေးတယ်။
နားမလည်တဲ့ရွာသားတွေ ကို နားရိုက်သွင်း ပြီး အော်ဟစ်ကြိမ်းဝါး ခိုင်းတယ်။
ခင်ဗျား က သီဟတင်စိုး သိပ်ကြိုက်တယ် ထင်တယ်။
တော်လှန် မှ ချည်း လွပ်လပ်ရေး ရ တင်ထင်နေတာ ကိုး။
ကော်မရှင် အစီရင် ခံစာ ကို သေချာ မဖတ်ဘဲ………………….
ဒေါ်စုကြည် ကို မမေးဘဲ မျက်စိမှိတ်ပြီး အော်နေလို့ကတော့လိပ်ခေါင်းပျောက်ဆေး ပဲ ဝယ်ထားပေတော့။
ခင်ဗျား က မီဒီယာတွေ ရှေ့ မှာ လူထုအား ကို သုံးပြီး သံဃာအား ဘုရားမဆန်သာ စေတဲ့အချိုးမျိုးနဲ့
ဒေါ်စု က တုံရွာ မှာ ဆွေးနွေး တုန်း ခင်ဗျား က ရှောင်နေပြီး တုံရွာ ထဲ မှာ ဒူးနန့်ပြီး ငါကွ ဆိုကာ
ရေနွေးကြမ်းသောက်နေတာ ကို့ ကျွန်တော်သိတယ်။
လိပ်ခွံတောင် သိမ်းတယ် ဆိုတာ လည်း အစီရင်ခံစာ မထွက်ခင် ခင်ဗျား နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ချင် လို့ဆိုတာ
ဒေသခံတွေ သိထား ပေမယ့်မြန်မာ တနိုင်ငံ လုံးနဲ့ကမ္ဘာ က မသိဘူး။ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ 
ညပိုင်း မှာ လိပ်ခွံတောင် ကို ရဲတွေ တက်သိမ်းအောင် ချုံပင် ဆွဲ မီးရှို့ တာတွေ လုပ်တယ်။
ဒေါ်စုကြည် ကျဉ်းထဲ ကြပ်ထဲ ရောက်အောင် ခင်ဗျား တို့ပို့ နေသလို အဲဒီလို ကျဆုံး သွားရင်
အာဏာရှင် ဟောင်း ရဲ့လက်ကိုင်တုတ် တွေ ဝမ်းသာနေမယ်။
ခွေးဝမ်းသာအောင် လေလည် မနေ နဲ့ ကိုဟန်ဝင်းအောင်…………………….။
ဒေါ် စုကြည် တို့သွေဖယ်ရင့် ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံတော် ပိုဆိုး သွားမယ်။
သမိုင်း ကို ရိုင်းအောင် မလုပ်ပါနဲ့ ။
မဖြစ်နိုင်တာ ကို မျက်စိ မှိတ် မအော်နဲ့။
ဒေါ်စု ပြောသွား သလို ကိုယ် ချည်း ယူ လို့မရသလို
သူ့ ချည်း လည်း မပေးနဲ့ ။
ဆွေးနွေး ပြီး အဖြေရှာ ကြည့်ပါ။
ဒေါ်စုကြည် က နိုင်ငံသမိုင်း ကို မရိုင်းစေခဲ့ဘူး။
ဒီလို မကောင်း ဘူးလား။
ဟို လိုလေး ရော ဆိုပြီး တင်ပြဆွေးနွေး ပါ။
ဒေါ်စု ဘာမေးမေး အော်ဟစ် ဆဲ ဆိုတာ နှင်ထုတ်တာ က အဖြေမဟုတ်ဘူး။
အစီရင်ခံစာ ရော ဖတ်ကြည့် ပြီး ပြီလား။
ခင်ဗျား အမှား ကို ဝန်ခံစရာ မလို ပါဘူး။ ပြင်လိုက် ပါ။
ခင်ဗျား တို့ကို လေးစားခဲ့တဲ့ 
ထားဝယ် ကန်ဘောက်ရွာရှိ တိုတယ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းသို့ ယနေ့နေ့လည်ပိုင်း ရောက်ရှိလေ့လာခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (17-3-2013)
ချင်းပြည်နယ်တိုးတက်ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် က အရက်ချက်ဖို့တိုက်တွန်း
Maha Mingyi's photo.
တစ်ချိန်တုန်းကအကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးဝှက်ထားသည့်ရှယ်ယာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်၊ အော်...ခေတ်ကကောင်းလာပြီးကိုး၊ ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် စစ်ဗိုလ်ဘဝနဲ.လွှတ်တော်ထဲတရားဝင်ဖြစ်သွားပြီးကိုး၊နိုင်ငံတကာကလည်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုတစ်ချို.ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးကိုး၊ သူတို.ကြွယ်သလောက်ပြည်သူတွေကမွဲသထက်မွဲတယ်၊ဒီအတိုင်းဆိုရင်၊ဗမာပြည်မှာစစ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ခိုင်မာသွားအောင်တစ်ဆင့်ပြီးလှမ်းတက်နေကြတာဖြစ်တယ်၊ စစ်တပ်တိုင်းပြည်တည်ထောင်ချင်လို.ပေါ့၊ဒါက၊ဘယ်သူကြောင့်လဲ?
ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်ခင်ညွန့်က ယခု လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဗိုလ်ရွှေမန်းကို အကြံပေးနေတယ်၊ ဗိုလ်ရွှေမန်းက ဗိုခင်ညွှန့်ကို လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလ...ို အပြေးကလေး သွားတွေ့တတ်တယ်တဲ့။
ခင်ရွှေပိုင်တဲ့ ကုမ္မဏီနှစ်ခုထဲမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၂၀ ဘိုး ထည့်ထားတယ်၊ ရွှေမန်းသားအောင်သက်မန်းတို့ထဲမှာလဲ အစုရှယ်ယာပါတယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေက ဦးပိုင်ကိုပြောတယ်၊ ဒီကောင်ကို ပစ်မထားနဲ့တဲ့၊ အခု ဦးပိုင်ကနေ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို မြန်မာငွေ တလ သိန်း ၂၀ စပေးနေပါပြီ။
ဗိုလ်ခင်ညွန့်တို့ ကျောက်တန်းမှာ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတခု လုပ်ထားတယ်။ အန်ဂျီအိုသဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ ခိုးပြီး ၀ှက်ထားတာတွေကို ဟိုလူက လှူသလိုလို ဒီလူကလှူသလိုလိုနဲ့ အခု ငွေဖြူတွေ လျော်ဖွတ်နေပြီဖြစ်တယ်။
မကြာခင်မှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် သား ဒေါက်တာ ရဲနိုင်ဝင်း သြစတေးလျှသွားပြီး ဘူမိဗေဒ ကုမဏီတခုနဲ့ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းတခုအတွက် လုပ်ကိုင်မယ်လို့ဆိုတယ်။
ေါ်ခင်းဝင်းရွှေက ရှင်ပါဂူက အစုရှယ်ယာကို ပြန်ပြီး ရှင်းတန်းလုပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတယ်။ ရှင်ပါဂူကိုနဲ့ အေးရှားကျန်းမာရေးဟော်တယ်ဆိုပြီး ယခု ကားပွဲစားတမ်း ဟံသာဝတီမှာ နေရာဝယ်ယူဖို့ ကန်ထရိုက်နဲ့ လုပ်ပြီးပါပြီ။
ဓါတ်ပုံ - မြတ်ခိုင်
............................................................................................... ၁၉၈၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ၂၅၊ ၃၅ နှင့် ၇၅ ကျပ်တန်များအား အစိုးရက ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့တယ်၊မသိ လိုက်ဖူး၊မသိဆိုဂျီတီအိုင်ဝင်ခွင့်ဖြေနေတာကိုး။ တနေ့၂ဘာသာဖြေရတယ်...နောက်တဘာသာမဖြေခင်ကျောင်းရှေ့ဒံပေါက် ဆိုင်မှာစားပြီးတော့၇၅ကျပ်တန်ပေးတော့ပယ်လိုက်ပြီတဲ့..စာမေးပွဲကပြန်ဖြေ ရမှာဆိုတော့ခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်၇တယ်။အိမ်ရောက်တော့မိဘတွေကမသိ ချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်၊နောက်နေ့၂ဘာသာထပ်ဖြေရအုံးမှာကိုး.အမှန်က အပြင်မှာကမ္ဘာပျက်နေပြီ..နှလုံးရပ်ပြီးသေတဲ့သူတောင်ရှိပါတယ်ဆို.. နောက်နေ့သချာင်္ဖြေပြီးခါနီးအင်းစိန်ဂျီတီအိုင်အဆောင်ဖက်ကအော်ဟစ်သံ တွေနဲ့အတူအဆောင်ကျောင်းသားတွေကျောင်းအုပ်ကြီးဦးမြင့်ဆွေရုံးခန်းရှေ့ မှာအပြန်စရိတ်ပေးဖို့တောင်းနေကြတယ်၊ရခိုင်ကလာတက်တဲ့မောင်မောင် ကျော်ကဦးဆောင်တယ်ပြောတယ်။ရဲရင့်ငယ်ကမှန်ဆောင်101မှာဖြေရတာဆို တော့အကုန်တွေ့နေ၇တယ်။ဆရာတချို့နဲ့ညှိနိုင်းတာအဆင်မပြေလို့ကျောင်း အုပ်ကြီးရုံးခန်းဖေါက်ပြီးဝင်ခွင့်အဖြေလွှာတွေထုတ်ပုံပြီးမီးရှို့ပြလိုက်ကြတယ်။ အခန်းစောင့်ဆရာကအဖြေလွှာတွေအမြန်လိုက်သိမ်းပြီးသူ့တိုက်ပုံအောက်မှာ ဖွက်ထားလိုက်တယ်။(အာအိုင်တီအဆောင်မှာက၅၇က်နေ့ညထဲကပွဲကြမ်းနေပြီ) အဆင်ပြေသွားပုံရပါတယ်ကျောင်းသားတွေအဆောင်ဖက်ပြန်သွားကြတယ်။ အဲမှာစတွေ့တာပဲ..နောက်ထပ်တဘာသာဖြေရအုံးမှာလေ..အဆောင်ကျောင်း သားတွေစုခဲ့တဲ့နေရာသွားကြည့်တော့..ဟာဒါငါ့အဖြေလွာလေး..ဆိုပြီးမီးကြွမ်း နေတဲ့အဖြေလွှာလေးတွေကိုင်ခါကိုင်ခါနဲ့ပေါက်ကွဲကုန်ကြပါတယ်။မျက်နှာစာ မှာ၇ှိတဲ့ပြူတင်းပေါက်ကမှန်တွေကွဲကုန်တယ်။အဆောင်ကျောင်းသားတွေပြန် ပြေးချလာကြတယ်။ရုံးခန်းကိုကြိုက်တာလုပ်၊မှန်ဆောင်ကိုတော့မလုပ်ကြဖို့ တားတယ်...သုံးထပ်လုံးမှန်တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က ရှားပါးအဆောက်အဦးကိုအင်းစိန်ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားတွေတန်ဖိုးထားကြတယ်။ အင်းစိန်ထ(၁)စာစစ်ဌာနမှာကနောက်တဘာသာတောင်ဖြေနေပြီ။သူတို့ကို သွားပြောမယ်ဆိုပြီးအင်းစိန်လမ်းမပေါ်ထွက်လိုက်ကြတယ်။အနဲဆုံး၁၅မိနစ် ကျော်လျှောက်ရမှာ၊နယ်ခံပပရိတ်ဿတ်ကလည်းအပြင်မှာလာအားပေးကြပါ တယ်။သစ်ကားကြီးတားပြီးတက်စီးသူတွေလည်းရှိတယ်။မအောင်မြင်ခဲ့ဖူး။ အင်းစိန်တရားရုံးရှေ့မှာရေနဲ့ပါထိုးလို့ရတဲ့ကားစီအိုင်ဒီဖက်အခြမ်းမှာရပ် ထားတယ်။လုံထိန်းတွေကလမ်းဘေးတဖက်တချက်ဆီမှာဒုတ်ဒိုင်းတွေနဲ့ တန်းစီရပ်နေတယ်။ကျောင်းသားတွေကအင်းစိန်ဆေးရုံရှေ့ကနေပဲစုနေ ခဲ့ရတယ်။ထ(၁)မှာဖြေတဲ့ကျောင်းသားတွေလဲပြန်လွှတ်လိုက်ပြီကြားတော့ အှဲ့မှာပဲလူစုကွဲသွားတယ်။နောက်တလလောက်ကြာမှာအထွေထွေဗဟုသုတ ပြန်ဖြေ၇တယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာအင်းစိန်စာစစ်ဌာနမှာဖြေတဲ့သူတွေအဖြေလွှာမီးလောင် တဲ့ဘာသာနုတ်ပြီးအောင်မှတ်တွက်ခဲ့တယ်။အဆောင်ကျောင်းသားတွေကိုဦး ဆောင်တဲ့ကျောင်းသားမောင်မောင်ကျော်တို့လည်းကျောင်းထုတ်ခံ၇တယ်ကြား တယ်။။၁၉၇၄နောက်ပိုင်း၇န်ကုန်မှာ၈၈၈၈အရေးတော်ပုံမတိုင်မှီပထမဆုံးလမ်း ပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။မဆလရဲ့အလွဲများထဲကတခုပါပဲ။ ရဲရင့်ငယ်.... ....................................................................................................... ၁၉၈၈မတ်လမှာပြည်ဂျီတီအိုင်မှာတက်နေပြီ၊ရန်ကုန်ကတက်သူအများစုကအပြင် ဆောင်မှာပဲနေရတယ်။အာအိုင်တီမှာပစ်တော့ညဖက်အဆောင်စောင့်အခန်းမှာ ဘီဘီစီနားထောင်ရင်း သိလိုက်ရတယ်၊ပြည်ဂျီတီအိုင်မှာလမ်းစဉ်လူငယ်ပွဲတွေ လုပ်နေတဲ့အချိန်၊ကျောင်းမှာဆန္ဒပြဖို့ ကမလွယ်၊မြို့ပြင်မှာလည်းဖြစ်၊စစ်အင်ဂျင်နီ ယာတပ်ကလည်းဘေးမှာဆိုတော့၊ပြည်ကောလိပ်ရှေ့မှာဆန္ဒပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက် ကြတယ်၊မတ်လ၁၅ရက်နေ့မွန်းတည့်ချိန်ထဲကပြည်ကောလိပ်ရှေ့မှာဆန္ဒပြမလို့ စောင့်နေတုံးလုံထိန်းတွေရောက်လာလို့ထွက်ပြေးရပြန်ရော၊တံတားနီမှာမဖြစ်သေး ဖူး၊ပြည်ကောလိပ်ကိုရန်ကုန်ကကျောင်းသားတချို့လာတရားဟောမယ်လို့လည်း သတင်းထွက်ခဲ့တာကိုး၊၁၆ရက်နေ့မှာကျောင်းတက်ပြီးနေ့ခင်းလောက်ရောက် တော့ကျောင်းသားတွေကိုစာမသင်တော့ဖူး၊အဆောင်ကိုတန်းပြန်ကြဖို့ပြောတယ် ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆူတယ်လို့ပဲကြားတယ်၊တံတားနီကိစ္စမသိသေးဖူး၊အပြင် ဆောင်ကလူတွေလည်းအစိုးရအဆောင်မှာသွားစုနေကြရတယ်၊ည၇နာရီလောက် မှာအဆောင်ထဲကိုတီအီးကားကြီးတွေဝင်လာပြီ၊ကျောင်းသားတွေကိုတက်ခိုင်း တယ်၊ပြည်ဘူတာရုံရောက်တော့ အပေါက်လေးတခုပဲဖွင့်ပေးထားပြီးရထားပေါ် တန်းတက်ခိုင်းတယ၊်တိုင်းမှုးအေး သောင်အပြင်မှာရောက်နေတယ်လို့လည်း ကြားရတယ်၊ရထားပေါ်တက်ဖို့ဆရာတွေကပဲ ကြီးကြပ်သွားတယ်...ရထားလဲ ထွက်မယ်အလုပ်မတိုင်ပင်ထားပဲကမ္ဘာမကြေသီချင်းစဆို ကြတယ်၊စာရွက်လေး တွေလုပ်ပြီးရေး၊လမ်းမှာကြဲကြတယ်၊မိုးလင်းရင်ပြည်သူတွေ ဖတ်ရအောင်၊ ရန်ကုန်မှာစနေပြီ၊စကြတော့၊စသဖြင့်ပေါ့၊တံတားနီမှာအရိုက်ခံရတာမသိသေး ဖူး။ပုံမှန်ကကြည့်မြင်တိုင်ဘူတာမှာရပ်ရမှာရန်ကုန်ကိုဝင်ထဲကရထားလမ်းဘေး မှာလူတွေ စောင်ကြည့်နေကြတယ်၊သူတို့ကြားတာနယ်ကကျောင်းသားတွေ ရန်ကုန်ဆင်းလာပြီဆိုတာပဲ၊ ရထားပေါ်ကကျောင်းသားတွေကလည်းတို့အရေး အော်တယ်၊ကြားဘူတာတွေသိပ်မရပ်ဖူး၊ အင်းစိန်နားရောက်တော့ထူးခြားမြင်ကွင်း တွေတွေ့နေရပြီ၊ရထားကအင်းစိန်ဘူတာမှာ အရှိန်လျော့တယ်၊အထုပ်ပစ်ချပြီးလူ ပါခုန်ချလိုက်တယ်၊ဈေးဖက်သွားတဲ့သံလမ်းနားရောက် တော့ဆယ်ပေကျော် လောက်မြင့်တဲ့ကင်းတဲလမ်းပေါ်လဲနေပြီးမီးလောင်ထားတာတွေ့ရတယ်၊ အခြားအပျက်အစီးတွေလည်းတွေ့နေရတယ်၊မေးကြည့်တော့ကျောင်းသားတွေ ကို အင်းစိန်ထောင်ကိုခေါ်သွားတယ်ကြားလို့ကျောင်းသားရောပြည်သူပါလာဝိုင်း ကြတာ၊အင်းစိန်ပေါက်တောဖက်က၀ိုင်းတဲ့သူတွေရော၊ဂျပ်ဆင်အလကရှေ့၊ အင်းစိန်ဒညင်းကုန်းကား လမ်းဖက်ကနေရောဝိုင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြ တယ်၊မအောင်မြင်တော့အပြန်လမ်းမှာ ကင်းတဲနဲ့လမ်းဘေးကတွေ့တာတွေမီးရှို့ ခဲ့ကြတယ်၊တရက်နှစ်ရက်နေတော့သိမ်ကြီးဈေး မီးရှို့ခံရပြန်တယ်၊တံတားနီမှာ အရေးသိပ်မကြီးသည့်ကျောင်းသားများကိုလိုင်းကားများဖြင်အိမ်အထိလိုက်ပို့ တာရှိသည်၊(ကျောင်းသူအတော်များများပါဝင်ခဲ့သည်)။ နောက်ပိုင်းဆက်တိုက် ကျောင်းသားသမဂ္ဂစာတွေလက်ခံရယူမိတ္တူကူးအစုအဖွဲ့အလိုက်ပျောက်ကြား စနစ်မြို့နယ်ခွဲပြီး(တစုကိုလေးငါးယောက်ထက်မပို)ကားမှတ်တိုင် တွေမှာဝေပြေး အော်ပြေးလုပ်ကြတယ်၊ (ဒီမိုကရေစီရရှိရေး....ဒို့အရေးဆို)တာ၈၈၈၈ကြမှဘယ်သူထွင်ပြီးစအော်လည်း မသိ၈၈၈၈ မတိုင်ခင်ကကျောင်းသားသက်သက်ပဲဆိုတော့သမဂ္ဂရရှိရေးအပြင် အော်တာကနေ၀င်းစန်းခြင်ကိုက်ခံရလို့ပြည်ပမှာဆေးသွားကုတာစသဖြင့်တ ယောက်ကအော်ကျန်တဲ့သူကစာဝေတယ်၊အရှိန်လုံးဝမပျက်ခဲ့ကြဖူး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်တွင်၈၈၈၈ကိုညနေ၃နာရီခွဲတွင်အင်းစိန်မီးရထားစက်ခေါင်းရုံရှေ တွင်အောင်မြေနင်း၍အစပြုခဲ့ကြပေတော့သည်၊၊ .......................................................................................... ရဲရင့်ငယ် 16-3-13
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ပြီး ပိုလျှံပါက အိမ်နီးချင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြောရင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ မပါစေ...
သတင်းထောက်တွေ သူတို့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့ရွာထဲဝင်ရင် ကင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အော်ဟစ် သူများ လုပ်ရပ်ကို ရ...
အစီရင်ခံစာ ပါ အကြုံပြု ချက်တွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့...
သလ္လာဝတီ တိုင်းမ် မှ တဆင့်ဟန်ဝင်းအောင် နဲ့အပေါင...
ချင်းပြည်နယ်တိုးတက်ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် က အရက်ချက...